Tag: yakabhadharwa shambadziro | Martech Zone
Tag: yakabhadharwa kushambadzira
Dhijitari kushambadzira yasvika padanho rekushomeka. 50% yevakuru vanodzivirira kushambadzira pane nharembozha uye desktop uye imwe 47% inodzivirira in-in ads. Aya ndiwo manhamba anotyaira Wayin chishandiso, Zvemagariro Nhau, chakakosha chishandiso chevashambadziri vemakambani nevashambadziri. Nhasi, kana vashandisi vepa Instagram vakadzvanya kana kutsvaira paRutsigiro Nhau, zvinowanzotora masekonzi mashanu akazara kuti webhusaiti yebrand iite mukati meapp. Vashandisi venhare vanoshaya moyo murefu, vanonetseka uye